Banking | Top slot Site | mfono & Intanethi £ 5 | £ € $ 800 Bonus :)
Phambi kokwenza idipozithi edlala imali yokwenene, ufuna ukubhalisa elithile. Kuba indlela nganye yentlawulo, ngaba unikwa imiyalelo eneenkcukacha. Unako kwakhona dala akhawunti eyahlukileyo nganye ndlela ikhethwayo iintlawulo. Landela la manyathelo angezantsi ukwenza imali kwi-akhawunti yakho:
.Nqakraza kwi "Cashier" icon kwaye ukhethe Deposit ukhetho.
.Khetha imowudi idipozithi.
.Gcwalisa ifomu enxulumene ekhethiweyo idipozithi indlela, kwaye nqakraza kwi Deposit.
.indlela akhetha ukuhlawulwa iya kuhlawuliswa ze-akhawunti yakho owenza.
.A uqinisekiso imeyile malunga kwiinkcukacha intengiselwano kuthunyelwa.
Zonke iinkcukacha zakho zebhanki zikhuselekile ngokupheleleyo njengoko TopSlotSite isebenzisa lofihlo nokukhuselwa software zamva.
Zonke iinkonzo zezimali online olwenziwe TopSlotSite zibonelelwa olor Management Limited. Cofa apha ukwazi ngakumbi.
iintsilelo Player kwaye ezingangeniyo Cofa apha.
.Fast multi-yentengiselwano usebenzisa Debit / ikhadi lakho Credit.
.Iimali zifumaneka ngoko nangoko kwi-akhawunti yakho TopSlotSite kanye idluliselwe
.iphwaulwe ngokupheleleyo Card Intlawulo Industry Standard Security Data (PCIName DSS)
.Iinkcukacha zoqhagamshelwano & inkxaso: nayiphi na imiba malunga amakhadi akho letyala / singatsala, nceda uqhagamshelane inkxaso yethu.
.Indlela ngemali: Imali nam usebenzisa Credit / ikhadi lakho Debit.
NETeller yinkonzo ngekhompyutha ekhawulezayo ekhuselekileyo kakhulu esikuvumela ukuba ungayibeki imali ngephanyazo esandleni sakho akhawunti TopSlotSite.
.ixesha Ukurhoxiswa azezi 24 iiyure abadlala VIP.
.NETeller ibonelela 24/7 Uxhaso lwabathengi
.website:www.neteller.com ifumaneka ngeelwimi ezininzi (IsiJaphani, IsiJamani, Danish, Spanish, IsiFrentshi, IsiTaliyani, Turkish, Swedish, Polish).
.Freephone: (+) 800-7767-6343 (Ostreliya, Ostriya , Bheljiyam, iTshayina, Dominikha, Finlend, Fransi , Jemani , Hong Kong, Ayalend, ElamaTaliyane, Japhan, Macau, elamaDatshi , Norowe, Photshugo, Singapho , Speyin, Taiwan, UK)
.Indlela ngemali: Uyakwazi imali kwiakhawunti yakho NETeller usebenzisa ezi ndlela zilandelayo: Ikhadi letyala (iintlawulo CARY zilungiswa ngexesha lokwenyani, Ndininika nonikezelo olumiyo kuzo imali yakho!), Khangela online (EFT), InstaCASH, kwaye Bank Wire.
.Internet Banking: kweebhanki kuvumela abathengi zabo ukutshintshela imali ngqo kwi-akhawunti zabo zebhanki ngekhompyutha kwi-akhawunti zabo NETeller. Bonisana kwibhanki yakho ukuba ufuna iinkcukacha ezingaphezulu.
.Faka ukuya $250 phezu yobhaliso akhawunti ukuya $2500 phezu uqinisekiso neenkcukacha ze-akhawunti yakho yebhanki.
.Skrill ligama entsha Moneybookers, ngenkonzo efanelekileyo jikelele intlawulo zokudlulisa imali ekuhambeni Internet.
.inkonzo lwasekhaya kunye 12 iilwimi ezixhaswa kunye iinketho intlawulo yasekhaya kwama 30 amazwe.
.Ezinye iinkonzo ezifana nokuthumela SMS iifeksi.
.Iinkcukacha zoqhagamshelwano & inkxaso:
.Indlela ngemali: Bhalisa zonke iinkcukacha mboleko / ikhadi utsalo ne yebhanki yakho kunye Moneybookers kwaye usebenzise ukuba uhlawule ngaphezulu 20,000 iivenkile online. Oku kuthetha ukuba akukho mfuneko ukuba ubanike ixesha ngalinye ufuna ukuthenga iimpahla kunye neenkonzo zeintanethi.
UKash inkonzo intlawulo esebenzisa iivawutsha ukulungele-ukuya-ukuchitha equlathe ikhowudi eneedijithi ezingama-19. Unakho ukuthenga iivawutsha UKash intanethi okanye imali okanye amakhadi amawaka kwiindawo ezifana neevenkile zasekuhlaleni arhente iindaba, uze usebenzise kwivawutsha okuhlawulela iimpahla neenkonzo (apho kwamkelwa). Akuyomfuneko ukuba ubhalise okanye anike naziphi na iinkcukacha zobuqu. Awunayo nokuba kufuneka i-akhawunti yebhanki.
.Ukuhlawula nge UKash, khetha nje Ukash ukhetho kwi Cashier in TopSlotSite . Emva koko faka ikhowudi eneedijithi ezingama-19 yaye ixabiso ivawutsha. Your payment is accepted immediately.
If you have any problems with depositing funds, don’t worry, ungaqhagamshelana nomnye iinkonzo zabaxumi abaqeqeshwe kakhulu abantu bethu 24 iiyure imihla email, yefowuni okanye chat online – Qhagamshelana nathi .